भारतिय चर्चित डान्सर सपना चौधरीको यस्तो भिडियो कसरी भयो लिक ? [भिडियोसहित] — SuchanaKendra.Com
भारतिय चर्चित डान्सर सपना चौधरीको यस्तो भिडियो कसरी भयो लिक ? [भिडियोसहित]
काठमाडौं । चर्चित डान्सर सपना चौधरीको नृत्य भिडियोहरू सोशल मिडियामा भाइरल भएका छन् । सपना चौधरी यी दिन देशको हरेक कुनामा अभिनय गर्दैछिन् । यस भागमा, उनको अर्को नृत्य भिडियो इन्टरनेटमा धेरै भाइरल भइरहेको छ । सपना चौधरी भिडियो यस भिडियोमा प्रसिद्ध हरियाणवी गीतहरूमा नाच्दै छिन् ।
भोजपुरी, पंजाबी र हरियाणवी फिल्महरूमा धमाका मच्चाउने सपना चौधरीको यो नृत्य भिडियोले पनि चर्चा पाएको छ । सपना चौधरीको यो नृत्य भिडियो उनको फ्यान पेजबाट इन्स्टाग्राममा सेयर गरिएको छ । यो भिडियो, एक दिन अघि सेयर गरिएको, हजारौं हेराईहरू प्राप्त भएको छ । फ्यानहरूले पनि यस भिडियोलाई धेरै प्रतिक्रिया दिएका छन् । हालसालै देसी क्वीनको हरियाणवी गीत पनि रिलिज भयो ।
आउँदो दिनमा उनका एक मध्ये एक परियोजना रक गर्न तयार छ । सपना चौधरी बिग बोसमा हरियाणवी फिल्ममा रिस उठेपछि देखिएकी थिइन । बिग बोसमा उनको सहभागिताले खलबली मच्चियो र उनले बिग बोसमा ठूलो धमाका पनि मच्चाइन् । बिग बोसबाट बाहिर आउने बित्तिकै उनले भोजपुरी सिनेमामा काम पाइन् ।
‘बैरी कंगना’ उसको विशेष नम्बर एकदम लोकप्रिय थियो । यस पछि, सपना चौधरीले एक पंजाबी फिल्ममा एक विशेष गीत गाइन । सपना चौधरीले अहिले बलिउडमा अभिनय पनि गरिसकेकी छिन् र उनको पहिलो फिल्म ‘दोस्ती के साइड इफेक्ट’ थियो ।